बैंकिंङ/बीमा - ६ महिने गभर्नरले चाहँदैमा होला त बिग मर्जर ? - page 2
बङ्लादेशमा बाढीको बितण्डा, पाँच लाख प्रभावित | कांग्रेस सांसदहरुले बाढी पहिरो प्रभावितलाई ५ दिनको तलब दिने | नेप्से पाँच अङ्कले बढ्यो | तामाकोशी गाउँपालिकाले दियो ११ सुकुम्वासी परिवारलाई लालपूर्जा | अब दोहोरो सरकारी सेवा लिन नपाइने
६ महिने गभर्नरले चाहँदैमा होला त बिग मर्जर ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लाग्दै छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौद्रिक नीतिमा फोर्सफुल मर्जरको नीति ल्याउने अभियानमा अलि बढी नै हतारिएका छन् । तर सरोकारवाला पक्षले यसको आलोचना गरेपछि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको मौद्रिक नीति केही समय पछि धकेलिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल बहसलाई प्रतिक्रिया दिदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् – मैले भन्नुपर्ने कुरा मिडियाहरुमा भनिसकेको थिएँ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ती बोलाएको छलफल कार्यक्रममा म गईन ।	थप पढ्नुहोस्
मुक्तिनाथ बैंकका कार्डहोल्डरलाई चिरायु अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि र चिरायु नेशनल अस्पताल तथा मेडिकल इन्ष्टिच्युट, बसुन्धाराबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई अस्पतालको तोकिएका शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा चिरायु अस्पतालको तर्फबाट सञ्चालन निर्देशक चण्डेश्वर वैद्य र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.का तर्फबाट बजारीकरण विभाग प्रमुख बसन्त बक्सीले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिसा डेबिट कार्डवाहक ग्राहकहरूले चिरायु अस्पताल बसुन्धारामा उपचार गराउँदा तोकिएका विभिन्न सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सानिमा लाईफ शेयर प्रभु क्यापीटलले बेच्ने
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. र प्रभु क्यापीटल लि. बीच मिति २०७६ आसार २५ गते सम्झौता भएको छ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको सर्व शाधारणको लागी छुटयाइएको शेयर सार्वजनिक निश्काशन गर्ने सम्वन्धि संझौत भएको छ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि.को प्रधान कार्यलय, कमलादीमा आयोजीत एक कार्यक्रमकाबीच कम्पनीका तर्फबाट महाप्रबन्धक शिवराम तिमिल्सीना तथा क्यापीटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोला प्रसाद पाठकले सो संझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
बुढेसकालमा इच्छाराजको बिचल्ली ! सम्बन्धबिच्छेद पछि सिभिल बैंकको साढे १७ लाख कित्ता शेयर बिक्री
काठमाडौं । बुढेसकाल चल्दै गर्दा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको भने बिचल्ली भएको छ । श्रीमती छोराछोरीसहित अर्बौंका मालिक रहेका इच्छाराजले आफ्नी धर्मपत्नी सिर्जना शाक्यसँग सम्बन्धबिच्छेद(डिभोर्स) गरेका छन् । तर उनको सम्बन्धबिच्छेद अन्य महिलाहरुसँग विशेष सम्बन्ध भएर वा सम्पतिका विषयमा घरझगडा भएर भने भएको होइन । सिभिल ग्रुप खडा गरि घरजग्गा व्यवसायबाट छोटो समयमा अरबौं कमाउन सफल इच्छाराज सिभिल बैंकका अध्यक्ष पनि हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
सनराइज बैंकमा किचलो,हाजिरै नगरी सीईओ श्रेष्ठले छोडे बैंक
काठमाडौं । बिगमर्जको चर्काे बहस चलिरहेकै बेला सनराइज बैंक भित्र भने गम्भीर किचलो उत्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण भर्खरै नियुक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज श्रेष्ठले बैंक छाडेका छन् । सञ्चालकहरु बीच भएको विवादका कारण ब्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने भन्दै सीईओ श्रेष्ठले कार्यभार नसम्हाल्दै सनराइज बैंकको पदत्याग गरेका छन्। चार बर्षे कार्यकालका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चालकहरुले नियुक्तिका बिषयमा विवाद गरेको भन्दै उनले अध्यक्ष मोतीलाल दुगडलाई पत्र लेख्दै बैंकमा काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
मौद्रिक नीति अनिश्चित, गर्भनर नेपाललाई गम्भीर धक्का !
काठमाडौं । बिग मर्जर गराएरै छोड्ने गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालको एकसुत्रीय अभियानमा तुषारापात लाग्ने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुलाई जवरजस्त लभ गर्न र बिहे गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएका गर्भनर नेपालको मनसुवा अर्थसचिव राजन खनालका कारण पछाडि धकेलिएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि भोलि असार २७ गते ल्याउने तयारी गरेको मौद्रिक नीति अर्थपुर्ण ढंगले रोकिएको छ र कहिले आउने भन्ने अनिश्चित बनेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक संधै उल्टो बाटोमा, गल्ती आफुले गर्ने, सच्याउन बैंकलाई तर्साउने, बिग मर्जर पनि त्यसैको श्रृंखला !
अहिले बिग मर्जरले बैंकिङ् उद्योग तातेको छ । अझ भनौं भने बैंकिङ उद्योगमा आतंक नै मच्चाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एक आपसमा तुरुन्त मर्ज भै हाल्न निर्देशन दिएको छ । मर्जरमा नगएमा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने औंजार प्रयोग गर्ने भनेर तर्साउन थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिले आफै बाटो बिराउछ । अनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले बाटो बिराए भन्छ । अनि त्यहि गल्ती सच्याउने वाहनामा फेरि आतंक मच्चाउन थाल्छ । त्यस्ता केही उदाहरणहरु यस्ता छन् :- नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्टो बाटो — उदाहरण नं. १ :- हचुवाका भरमा लाईसेन्स बितरण सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो नेपाल ।	थप पढ्नुहोस्
नेप्से परिसूचक ओरालो मै
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचक १.१२ अङ्कले घटेर एक हजार २४९.१५ मा पुगेर रोकियो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.७३ अङ्कले घटेर २६८.३३ मा थामियो । स्टकका अनुसार आज कूल १६८ कम्पनीका २९ लाख ९८ हजार ९४७ कित्ता शेयर रु ५७ करोड ३४ लाख ४७ हजार ५०९ मा खरीद बिक्री भए । परिसूचक ओरालो लागे पनि कारोवार भएका ११ मध्ये तीन उपसमूहको शेयर मात्र बढ्यो ।	थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र मुक्तिनाथ विकास बैंक बीच सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नेपाली बीमा क्षेत्रमा स्थापिप राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल तथा विकास बैंकहरुको अग्रणी मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडबीच आषाढ २२ गते आइतबारका दिन एक आपसमा ब्यवसाय आदान प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप कम्पनीले बैंक सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई प्राथमिकता दिने तथा बैंकले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमा गर्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।	थप पढ्नुहोस्
बिग मर्ज होईन ,पाँच सय र हजारका नोट बन्द गरौं
मौद्रिक नीति अघि नै अर्थात १५ दिन भित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिग मर्जरको प्रस्ताव लिएर आउनु नत्र मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्स मर्ज गरिने छ भनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका छन् । बैंकको बिग मर्जर किन र के को लागि हो ? आफैंमा प्रष्ट छैन् । मान्छेहरु शंका गर्छन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकतन्त्रिय शासन व्यवस्थालाई बढावा दिन । अर्थतन्त्रको सम्पुर्ण नियन्त्रणका लागि सजिलो गराउन गरेको होईन भन्न सकिने के आधार छ ? हो , केही चाहिँदा नचाहिँदा बहाना त बनाउनु नै पर्यो ।	थप पढ्नुहोस्
कुलेखानी ड्याम खोलिँदै, चार जिल्लाका ...